Enyemaka shuga shuga, gaa na Chaatịzi Chart Guide> Reddit | Sugarlove®
Enyemaka shuga shuga, gaa Nlekọta Atụmatụ Calculator> Reddit
Nke mbu nke Sugarlove® bu ihe mbu banyere achota nkpuru obi, tupu ịmalite itughari uche. Nke a gụnyere yana ejedebeghị na shuga shuga, nna shuga na shuga ikwere ikari, Gaa na Calculator Chart Guide> Reddit. Site na nke ahụ, otu a ka esi emekọrịta shuga na inye ụtụ ọdịnala na-aga.
Prognosis Ọrịa shuga
Inye ego shuga papa gị ma ọ bụ ego shuga nne gị n'ihe metụtara ego gị ọ bụla? Ì chere na ị na-ezuru ihe sitere n’aka onye tọrọ gị, ọgaranya nke siri ike na nke siri ike? Ego na-abụkarị ihe mgbagwoju anya ma mgbe ọ ruru ego ole shuga nwa gị na-enye ohere, gaa na Calculator Chart Guide> Reddit kwesịrị ịdị, enweghị ụkpụrụ ọ bụla. Ọtụtụ ụmụ ọhụrụ shuga na-anwa ikpebi uru ha dabere n'ọdịdị anụ ahụ ha, afọ, agụmakwụkwọ n'etiti ihe ndị ọzọ mana nke a abụghị ikpe.
Inye nwa afọ shuga abụghị maka ikpebi uru gị bara. A na-akwụ gị ụgwọ oge na onyinye ị na-enye na ndụ shuga papa ma ọ bụ ná ndụ mama mammy. Ofgwọ shuga papa gị ma ọ bụ inye gị mama mama gị na-adabere na nke gị ụdị shuga nwa na-ahazi kedu ihe diri mmadu abuo. Yabụ kedu mmachi mmachi ga - enye nwa shuga? Ndị a bụ ndụmọdụ ole na ole iji nyere gị aka ịrịọ maka mmachi nwa ọhụrụ shuga.
Kpebie Ego ole Ka Ntukpo Nri Sulu Ichoro
Dịka nwa shuga, otu nnukwu ihe ịma aka bụ ịchọpụta ihe mmachi shuga nna gị ma ọ bụ inye mama mama mmachi kwesịrị ịbụ. Sugarmụ shuga dị iche iche nwere ihe mkpali dị iche iche mgbe ha na-achọ papaDies shuga. Whatmara ihe ị chọrọ site na mbido dị ezigbo mkpa. Ọ ga - eme ka ị ghara inwe afọ ojuju na inwe nghọtahie na - enweghị isi gbasara nkwekọrịta nwa ọhụrụ shuga, gaa na Calculator Chart Guide> Reddit.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ihe ọ ga - eme ka ego ị na - akwụ maka ya, saịtị dị ka Kedu ihe bụ ọnụahịa gị Nweta ikpo okwu g’enye gi aka ichota shuga ndi nwere oge iji nwa oge. Sugarmụ shuga na-edebanye aha n'efu mgbe ahụ, nna papa shuga na-ezigara ha onyinye ha maka ego ole ha ga-enweta maka ụbọchị ga-abụ. Nwere ike ịnabata onyinye ha ma ọ bụ kpọọ ọnụahịa gị.
Sugarlove® bụ ebe nchekwa dị mma maka nzute & ịmịpụta elu dị ka Sugardater nke nwere uche na ebe nchekwa mmekọrịta yana mgbakwunye Platform nke Facebook!
Ọ bụrụ na ị na-achọ nnabata shuga shuga na-enye mama shuga nke ga-ekpuchi mmefu gị niile, a na-eme atụmatụ na, obere afọ nwa shuga na-enye ha ego bụ $ 3000 kwa ọnwa. Exactlymata nke ọma n’ọrụ baara gị uru, bido site n’ịkọwa ego ị na -eri, ị ga-ekpebi ego ole shuga nwa mmachi ga-abara gị uru. Ọ dịkwa mkpa ikwurita atụmanya gị ka Nkwekọrịta shuga momma, gaa Calculator Chart Guide> Reddit ga-arụ ọrụ maka unu abụọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ inwetara shuga mama ma ọ bụ mmachi papa papa, ị ga-ama na ndị nna shuga ndị ahụ na-enye $ 10,000 na ndị ọzọ kwa ọnwa adịghị mfe ịbịa. Ọ bụrụ n’ịhụta nke ọ bụla n’ime ha, ha na-ewepụta oge ha iji wulite ntụkwasị obi tupu ha etinye ego ha. Ezigbo shuga ndị a bụ ụdị ụmụ ụdị ha chọrọ ka ha na ha na-anọ.
Buru n’uche na ị extraụbiga mmanya ókè mgbe ị na-arịọ maka enyemaka anaghị arụ ọrụ na ọtụtụ shuga nna. Forrịọ maka ihe karịrị $ 10,000 kwa ọnwa nwere ike ịmepụta ahụmịhe na-akụda mmụọ. Ikwesiri ikwusi iju ihe ichoro. Debe nkwado nwa ọhụrụ shuga dịtụ elu karịa ihe ị chọrọ n’ihi na dịka ọ dị onye ọ bụla na - azụmaahịa, onye gị na ya nwere ike ịnwe ịbelata ego ha ga - akwụ maka shuga papa gị ma ọ bụ shuga mama, Enyemaka, gaa Leta Calculator Chart Guide> Reddit.
Chọrọ Meethụ Singles Na Mpaghara Gị?
Ego Ole Sugar Papa Ha Na-enye Ha?
N'adịghị ka nkwenye a ma ama, ọ bụghị nna shuga niile na shuga dị ka mmiri ara ehi nwere akụ na ụba na-akparaghị ókè. Ọ bụrụgodị na ha pụta na ha bara ọgaranya, ha nwere ike ghara inwe nnukwu mmiri mmiri maka ego mmachi akpa ụmụaka na-anabata. Ha nwere ike tinye ego ha na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ezinụlọ ndị ọzọ dị ka ego ntụkwasị obi maka ụmụ ha.
Mgbe ị na-ekpebi ego ole nna gị na-anabata shuga ma ọ bụ ịnwe shuga nne gị ị chọrọ, chebara ebe ahụ echiche. Nke a bụ n'ihi na ọnọdụ ahụ nwere ike inyere gị aka ịghọta ọkara ego mmachi shuga ị nwere ike ị nweta site na shuga nna na ndị anwụrụ ọkụ na-ebi n'ógbè ahụ. Townsfọdụ obodo na obodo enweghị ọtụtụ nnabata shuga bara ụba yabụ Nkwekọrịta, Gaa Leta Calculator Chart Guide> Reddit na mpaghara ndị ahụ pere mpe.
Mgbe ole na-acho shuga shuga ma ọ bụ nne, ụzọ ọzọ iji chọpụta ma ị ga-enweta ezigbo ego mmachi akpa nwa bụ site na ịme ụfọdụ nyocha banyere ụdị mmadụ ha bụ, ụzọ ha si enweta ego na ma ha nwere ọtụtụ ndị ọ dabere. Inye shuga mama gị nwere ike ịdị elu ma ọ bụ belata dabere na ihe ndị a.
Onyinye, gaa Nleta Chaatị Ntuziaka> Reddit okwu
Papa nna ọ bụla na -eme ka shuga na shuga dị iche nwa ha na-enye nwa ahụ ọkwụrụ na nnabata shuga nna ha na-adabere na usoro ha. Oge bụ otu n’ime ihe kachasị mkpa. Oge ị na-etinye na mmekọrịta gị na shuga na-emetụta ego gị. Ọ bụrụ na ị na-etinyekwu oge, yabụ ị ga-enwetakwu maka shuga papa gị ma ọ bụ inye mama mama shuga.
Ọdịmma nke ihe ị na-eme na mmekọrịta shuga na-ekpebi ego ole afọ inye nwa ọhụrụ shuga ị ga-enweta. Ọ bụrụ n’ị na-eme njem ma na-anọkọ ọtụtụ ngwụsị izu, nke a pụtara na nwa shuga ga-eme ọtụtụ oge, a ga-akwụkwu shuga nna na-enye nsogbu. Ọ bụrụ n’ịghị na-apụ n’obodo ma na-anọkọ naanị abalị ụfọdụ, inyeaka shuga ma ọ bụ inye shuga mmachi ga-ebelata.
Cchụpụ ya bụkwa ihe ọzọ dị mkpa mgbe ị na-ekpebi ego ole shuga nwa ga-akwụrịrị. Ọ bụrụ na a na-atụ anya na shuga shuga agaghị enwe enyi ma ọ bụ enyi nwanyị ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ, mama mama nkwere ma ọ bụ nkwekọrịta nna papa, gaa na Calculator Chart Guide> Reddit kwesịrị ịbụ karịa. Nke a bụ n'ihi na shuga shuga ga-ahapụ ọtụtụ nnwere onwe ha ruo ụbọchị na kroup na sugar daddies.
Mmefu ndị ọzọ na-abịa na ahụmịhe shuga na-ekpebi mmachi shuga nwa ọhụrụ ị kwesịrị ịrịọ maka ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ njem, ịzụ ahịa maka uwe ọhụrụ ma soro nna shuga na-aga nzukọ azụmahịa, mgbe ahụ ị ga-achọ ego ọzọ iji kpuchie mmefu ahụ. Rịba ama na mmefu ndị a abụghị akụkụ nke nkwere nna na-ahụ maka nna gị ma ọ bụ Inye shuru shuga, gaa na Calculator Chart Guide> Reddit. Papa shuga ma ọ bụ mama ya kwesịrị ịkwụ ụgwọ ihe niile ịchọrọ mgbe gị na ha na-emekọ ihe.